Tropy Jeannette – « Tsiahy an-kira »: nomen-danja ny hira teatraly | NewsMada
Tropy Jeannette – « Tsiahy an-kira »: nomen-danja ny hira teatraly
Seho niavaka teto an-dRenivohitra tamin’ny faran’ny herinandro teo ! Hira teatraly ranoiray no nentin’ny tropy Jeannette nanafana ny efitrano malalaky ny Alliance Française etsy Andavamamba, omaly tolakandro. Feo, tena malagasy. Gadona, ilay tsy faheno any amin’ny firenen-kafa. Tononkira, mampita hafatra mafonja. Ao ny mivantana fa tsy vitsy koa ireo mindrana ny zavaboahary sy ny hakantony, sns.
« Tsiahy an-kira », endrika nanehoan’ny tropy Jeannette indray fa manana ny lanjany eo amin’ny Malagasy ny fananana ny hira teatraly. Tsy fahafinaretan’ny sofina ihany fa indrindra, fisintonan-kevitra, fandraisana anatra, fanomezana hery izay ketraka, fitsinjova-mandeha ireo mila izany, sns.
Tsikaritra teny an-toerana fa somary nomena ampaham-potoana bebe kokoa ny sanganasan’Andrianary Ratianarivo sy Rasamy Gitara. Tsapa ihany koa fa « tsy manam-paharoa » ny hira teatraly raha hiraina amin’izao, indrindra fa izy any anaty piesy teatraly.
… Na izany aza, mila ezaka lehibe ny fampitiavana indray ity karazan-kira ity ny tanora. Ilaina atao matetika ny seho tahaka ny « Tsiahy an-kira ». Mila voizina, araka izay tratra amin’ny haino aman-jery sy ny fitaovan-tserasera, ny hira teatraly. Fa anisan’ny goavana ihany koa ny fanoratana azy ireny solfa na solfezy mba tsy ho very na sanatria hiova an-dalana any aoriana any.